Semalt: WordPress Theme karazana mila fantatra momba
Ny fisafidianana ny sehatra WordPress marina dia iray amin'ireo safidy sarotra indrindra hataonao amin'ny tranokalanao na ny bilaogy. Ny iray amin'ireo endrika tsara indrindra amin'ny WordPress dia ny hoe afaka manome fomba fijery matihanina sy manatsara kokoa ny tranokalanao ianao ary tsy mila manana fahaizana manokana hanamboarana na hanamboatra tranokala iray. Ny lohahevitra WordPress dia mamela fahatsapana tsara amin'ny votoatin'ny mpamaky ary manova ny fomba nandikana ny tranonkalanao. Ireo lohahevitra dia afaka manova ny tranokala na ny bilaogy amin'ny alalan'ny tsindry tsotra.
Ankoatra ny fanaraha-maso ny fijerin'ny ankamaroan'ny tranokalanao na ny blôginao, ny lohahevitra WordPress dia manana anjara andraikitra lehibe na lehibe ao amin'ny SEO (famatsiam-bola amin'ny fikarohana). SEO dia dingan'ny fanatsarana na fanatsarana ny tranokalanao na blôginao mba hahafahany mamaritra tsara ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny fikarohana (SERPs). Google, Bing, ary Yahoo misafidy ireo tranonkala miaraka amin'ny lohahevitra lehibe ary mamaritra azy ireo amin'ny teny manan-danja maro. Afaka mametraka mora foana ny tranokalanao ianao ary afaka mitondra fiara fitaterana organika mandritra ny herinandro.
Oliver King, manam-pahaizana malaza Semalt , dia manondro fa misy karazana lohahevitra telo amin'ny WordPress:
Ireo lohahevitra WordPress premium dia tena avo lenta ary novokarin'ny mpanoratra tsara indrindra na orinasa lehibe. Tsy maintsy mandoa zavatra ianao mba hahazoana ireo lohahevitra ireo, ny widgets, ny menus, ary ny safidy rehetra. Ny lohahevitr'ireo loha-hevitra dia mandany vola avy amin'ny $ 50 ka hatramin'ny $ 500 isaky ny tranokala ary nahazo alalana..Manolotra tombony ho an'ireo tranonkala ireto:
Ireo mari-pahaizana ambony
Ny SEO dia mora
Ampiharo ireo fitsipika avo lenta, ambony sy farany
Ireo lohahevitra tena ambony dia tena manintona tsara ary manao tsara
Maivana kokoa noho ny foto-kevitra malalaka izy ireo ary manome fanohanana feno an'ireo mpampiasa
Azo antoka ny filazana fa misy an'arivony ireo loha-hevitra WordPress an'arivony ao amin'ny aterineto. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy mila mandoa na inona na inona ianao mba hizarana ireo lohahevitra ary afaka mametraka sy manantona azy ireo avy hatrany. Ireo lohahevitra ireo dia tonga amin'ny lahatahiry ofisialin'ny Wordpress ary tonga amin'ny karazan-damosina, endrika ary layout samihafa. Ny iray amin'ireo goavambe goavam-be amin'ny sehatra malalaka dia ny tsy ahafahan'izy ireo manampy anao hanatsara ny tranokalanao amin'ny fomba tsara kokoa. Ireo mpandraharaha matihanina dia nanamboatra ny lohahevitra ary nanampy azy ireo tamin'ny aterineto, saingy vitsy monja no azon'ireo tombony azo.
Satria ny tontolon'ny WordPress dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny tranonkalanao, SEO, taham-pifaninana, ny fahombiazany, ary ny fitomboan'ny blôginao, tokony aleonao ny loha-hevitra tena izy amin'ny WordPress malalaka. Raha tsy manam-bola ampy hividianana loha-hevitra ianao dia azonao atao ny manandrana ny roapolo amby roapolo na roapolo ambinifolo, izay ireo lohahevitra roa tena tsara indrindra WordPress
Ireo fomba amam-panao WordPress dia fantatry ny besinimaro amin'ny fomba fijery tsy manam-paharoa sy mahafa-po. Ireo lohahevitra ireo dia mitaky anao hiditra amin'ireo fivarotana aterineto ary manana ny endriny manokana. Ny loha-daza mahazatra dia natsangana ho an'ny tranokalan'ny orinasa na marika nataon'ireo mpamorona sy mpanakanto manohitra ny lozam-piaramanidina. Manolotra safidy sy fahafaha-manao maro izy ireo, saingy voafetra amin'ireo mpampiasa izay nandoa ny saram-pidiny ireo.
Ny iray amin'ireo goavambe lehibe dia ny lafin-javatra mahazatra dia lafo, mihazakazaka eo amin'ny $ 600 hatramin'ny $ 6,500 arakaraka ny fahaiza-manamboatra sy malaza. Ny ohatra tsara indrindra dia ny lohahevitra momba ny tranon'ny Rose sy ny lohahevitra mahazatra an'ny Side Income Source .